Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Guine News » Guinea ayaa ka baxday Midowga Afrika kadib afgembigii militariga
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Guine News • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Guinea ayaa ka baxday Midowga Afrika
Midowga Afrika ayaa ku boorriyay hoggaamiyayaasha afgambiga inay xaqiijiyaan ammaanka madaxweynaha xilka laga qaaday iyo kuwa kale ee la xiray.
Midowga Afrika oo joojiyay xubinnimadii Guinea.
Jamhuuriyadda Guinea ayaa laga joojiyay dhammaan go'aamada go'aan qaadashada ee Midowga Afrika.
Midowga Afrika ayaa joojiyay xubinnimada Guinea ka dib afgembigii milatari ee Axaddii la soo dhaafay.
Waaxda Nabadda iyo Amniga ee Arrimaha Siyaasadda ee Midowga Afrika ayaa maanta ku shaacisay boggeeda Twitter -ka in ururku uu joojiyay xubinnimadii Guinea ilaa Jimcihii, sababtuna waa afgambi milatari oo dhawaan ka dhacay dalkaas.
"Golaha <…> wuxuu go'aansadaa inuu ka joojiyo Jamhuuriyadda Guinea dhammaan hawlaha/go'aamada go'aan qaadashada ee AU," Midowga Afrika fariin ayaa akhrinaysa.
15-ka dal ee ku bahoobay urur goboleedka ayaa shaqada ka joojiyay Guinea kadib Axaddii afgambi militari oo uu hoggaaminayo Col. Mamady Doumbouya. Bishii Sebtember 5 -tii, Korneyl Mamady Doumbouya, oo ah taliyaha cutub ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Guinea, ayaa ku dhawaaqay in la xiray Madaxweyne Alpha Conde, oo xilka hayay tan iyo 2010 -kii.
Jabhaduhu waxay u saareen guddi heer qaran ah xoojinta iyo horumarinta Guinea, waxay baajiyeen dastuurkii, waxay kala direen xukuumaddii iyo baarlamaankii dalkaas, waxay magacaabeen guddoomiyeyaal ciidan, waxayna soo rogeen bandow.
Junta ayaa sidoo kale ku amartay bangiga dhexe inuu xannibo dhammaan akoonnada dowladda si loo sugo hantida dowladda loona “ilaaliyo danta dalka”.
Midowga Afrika ayaa ku boorriyay hoggaamiyayaasha afgambiga inay xaqiijiyaan ammaanka madaxweynaha xilka laga qaaday iyo kuwa kale ee la xiray. Conde ayaa weli ku jira gacanta junta, kuwaas oo kaliya sheegay in uu ku sugan yahay meel ammaan ah oo uu heli karo daryeel caafimaad.
Laba qof ayaa ku dhintay, laba kalena way ku dhaawacmeen Arizona Amtrak ...